Imivuzo yethu kukunciphisa amaxabiso okuthengisa, iqela elinengeniso elinamandla, iQC ekhethekileyo, iifektri ezomeleleyo, iinkonzo ezikumgangatho ophezulu zeMveliso ,,, ziinjongo zethu. Silapha silindele abahlobo kwihlabathi liphela! Siye abanamava umenzi. Ukunkcenkceshela uninzi lweziqinisekiso zakho ezibalulekileyo kwintengiso yazo yeeMveliso, Siyakwamkela ukuba undwendwele inkampani yethu kunye nomzi mveliso kunye nendawo yethu yokubonisa ibonisa iimveliso ezahlukeneyo kunye nezisombululo eziza kuhlangabezana nokulindelweyo. Okwangoku, kulula ukutyelela iwebhusayithi yethu. Abasebenzi bethu bokuthengisa baya kuzama konke okusemandleni abo ukukunikezela ngeenkonzo ezilungileyo. Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi nge-imeyile, ifeksi okanye ngomnxeba.